राज्य पुनर्संरचना मात्र जटिल विषय हो – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१० कार्तिक २०७७, सोमबार १५:२८ English
राज्य पुनर्संरचना मात्र जटिल विषय हो
युवराज ज्ञवाली, सचिव नेकपा एमाले
० सहमति खोज्न नेतालाई रिर्सोट नै चाहिने ?
– होइन एकान्तमा ठण्डा दिमागले टेनसनबाट मुक्त भएर विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने स्थिति आउँछ ।
० टुंगोमा पुग्न सकिन्छ ?
– त्यो सम्भावना बढेको छ ।
– विषय जटिल छ, निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपको बारेमा सहमतिमा पुगिहालिन्छ ।
० कसरी सहमतिमा पुगिन्छ ?
– दुईवटा विकल्प प्रस्तुत भएका छन् । एउटा विकल्प एमालेले प्रस्तुत गरेको विकल्प सबभन्दा वैज्ञानिक छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपति मुलुकको आवश्यकता हो । यदि त्यसमा भएन भने पनि हामी अर्को विकल्पमा लचिलो हुन सक्छौं । राज्यको पुनर्संरचना चाहिँ जटिल विषय हो । तर निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ । कुनै एउटा पार्टीको एजेण्डालाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने हुँदैन । जे विषयमा सहमति हुन्छ, त्यो अहिलेको आवश्यकता हो ।
० न्यायप्रणालीमा कसरी कुरा मिल्छ ?
– न्यायप्रणालीमा पनि कुरा मिल्छ । राज्य पुनर्संरचनाबाहेक अरु विषयमा त्यस्तो ठूलो समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन । प्रदेशको सीमानकन र नामाकंन जटिल विषय छ । यसमा एनेकपा माओवादी अलि लचिलो हुनुपर्छ । माओवादी लचिलो हुँदा शान्ति प्रकृया पनि टुंगोमा पुग्ने अवस्था छ ।
४ बैशाख २०६९, सोमबार ११:३५ मा प्रकाशित